Namakia Soalala : Angonoky iray tratra saika nisy hanondrana | NewsMada
Sokatra angonoky iray efa maherin’ny 30 taona, saika nisy hanondrana no tratran’ny mpitandro filaminana tao Namakia, ny 18 febroary teo. Nahatratra ity sokatra ity tao anaty gony iray nisy nanipy amoron-dàlana ny zandary. Tonga avy hatrany ireo tompon’andraikitry ny tontolo iainana sy ny talen’ny valan-javaboahary ao amin’ny helodranon’i Baly, Soalala, raha vao naharay ny antson’ireo mpitandro filaminana ireo. Nalaina ilay sokatra haverina faran’izay haingana indrindra any amin’ny fonenany voajanahary any Baly.
“Raha afo no tsindry nahazo ireo angonoky ireo teo aloha, mirongatra izao ny fangalarana sy fanondranana an-tsokosoko azy, indrindra amin’izao vanim-potoan’ny orana izao”, hoy ireo tompon’andraikitra. Fotoana ivoahan’ireto sokatra ireto mantsy izao any amin’ny toerana misy azy rehefa avy natory nandritra ny vanim-potoan’ny maintany.
Tany an-toerana ihany koa ny solontenan’ny Durell, fikambanana anglisy nanankinan’ny fanjakana Malagasy, ny fitahirizina sy fikarakarana manokana ireto harem-pirenena ireto. Nanaporofo izy ireo fa tena avy ao Baly tokoa ity sokatra ity. Maromaro ny tao anatin’ilay gony fa io iray io sisa hita, raha ny voalazan’ny Durell.
Mbola tavela teo amin’ny lamosiny ny marika nametrahana ny émetteur izay fanarahan-dia ny toerana rehetra izay misy azy. Efa nesorin’ireo nikasa hanondrana azy moa izany émetteur izany. Velaran-tany 50 ha ny fonenan’ireo angonoky ireo ao Baly. Tsiahivina fa mampiavaka antsika izy ireo, satria ao Soalala irery ihany no ahitana azy manerana izao tontolo izao.